.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: ၉၈-နှစ်မြောက် ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့
ကဲဗျာ အခုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအားလုံး မျှော်လင့် ရင်ခုန်နေတဲ့ February 14-တော့ ရောက်တော့မယ်ဗျာ။
ဘာနေ့လဲဆိုတာ အသဲနှလုံးရှိသူ လူတိုင်းသိကြပါတယ်။ လူငယ်တိုင်းကအဲဒီနေ့အတွက် မျှော်လင့်ချက်တွေရင်ခုန်ခြင်းတွေနဲ့ပေါ့။
ကောင်းပါတယ်ဗျာ ချစ်တတ်ကြတာ။ ဒါပေမဲ့ ၀မ်းနည်းဖို့ ကောင်းတာ ရှိလို့ပါ၊ အဲဒီ February 14-မတိုင်ခင် တစ်ရက်က ဘာနေ့လဲ
ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူငယ်အများစု မေ့နေတယ်ဗျာ။ February 13-ဟာ ကျွန်တော်တို့ အခုလို လွတ်လပ်စွာ
ရင်ခုန်နိုင်အောင် ကျွန်သဘောက်ဘ၀ကနေ လွတ်မြောက်အောင် ဦးဆောင်တိုက်ပွဲ ၀င်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်တို့နိုင်ငံရဲ့
ဖခင်ကြီးတစ်ပါး ဖြစ်သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ မွေးနေ့ပါ။အဲဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး စပ်ဆိုထားတဲ့ သီချင်းလေး
တစ်ပုဒ်ကို ပြန်ဝေမျှ လိုက်ပါတယ်။ သီချင်းလေးကတော့ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ကို မမေ့ကြဖို့ လူငယ်တွေကို သတိပေးထားတာပါ။
ဘယ်လောက်ပဲ ခေတ်ကြီးနဲ့ အမှီယှဉ်ပြိုင်နေရလို့ အလုပ်ရှုပ်ပါစေ February 14-ကြရင်တော့ အားလုံးရင်ခုန်တတ်ကြပါတယ်။
ဒီလိုပဲ February 13-မှာလည်း ကျွန်တော်တို့ကို ဒီလို လွတ်လပ်စွာ ရင်ခုန်မှုတွေရအောင် အသက်နဲ့လဲကာ ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့
မြန်မာပြည်ရဲ့ လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ဖွားမြင်လာသော နေ့ရက်ကို သင်တို့ရဲ့ ဖြူစင်သောနှလုံးသားဖြင့်
အသည်းနှလုံးထဲကနေ အမှတ်တရ ရင်ခုန်မှုအစစ် ပေးဆောင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။
နံပါတ်တစ်- ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ သီချင်း
နံပါတ်နှစ် - ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ထက် ချစ်သူများနေ့ကို အဓိကထားနေသူတို့အတွက် သတိပေး သီချင်း
နံပါတ်သုံး- သားသားလေး ဖန်တီးထားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ သီချင်း စာတန်းထိုး Flash Song
နံပါတ်လေး- သားသားလေး ဖန်တီးထားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ သီချင်း စာတန်းထိုး Flash Song ပုံစံတမျိုး
Attachment: Gen 96.mp3
Attachment: Dont Forget.mp3
ယခုနှစ် (၂၀၁၃)တွင် ကျရောက်သော အဘိုးဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ၉၈-နှစ်မွေးနေ့ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်
သားသားလေးဖန်တီးဂုဏ်ပြုထားတဲ့ Flash Song-လေးပါ။ မူရင်းအဆိုရှင်များကတော့ ကိုထွဏ်းထွဏ်းနှင့်အဖွဲ့လို့
ထင်တာပါ။ ၂၀၁၀-လောက်က သားသားလေး Mp3-သီချင်းအနေနဲ့ နားထောင်ဖူးခဲ့တဲ့ သီချင်းလေးပါ။
သီချင်းဆိုလိုတာကတော့ “ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄-ချစ်သူများနေ့ကိုသာ အဓိကထားနေပြီး, ဖေဖော်ဝါရီ
၁၃-မှာကျရောက်တဲ့ အဘိုးဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ကို မေ့ထားတဲ့သူများအတွက် စပ်ဆိုထားတဲ့” သီချင်းလေးပါ။
ဒီပို့စ်လေးတွေကို သားသားလေးရဲ့ဆိုဒ် http://amaetharr.multiply.com/ က ကူးယူပြီး  ပြန်လည် မျှဝေပေးတာပါ။
အောင်ဆန်းဇာနည်ဆိုတဲ့ ကဗျာပုံလေးကိုတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် မမေသဇင် တင်ထားတဲ့ ပို့စ်လေးတစ်ပုဒ်ကိုပါ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော် ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ အမှတ်တရ လုပ်ထားတာလေးကိုတော့  ဒီနေရာလေးကို နှိပ်ပြီး သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ပြည့်ထောင်စုနေ့(၁၂.၂.၂၀၁၃)င့် ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ (၁၃.၂.၂၀၁၃) အထိမ်းအမှတ် ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ ပတ်သက်သည့် စာပေများ ၊
ဗိုလ်ချုပ်ကိုယ်တိုင်ရေးသားခဲ့သည့် စာပေများကို တင်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ အလိုရှိသမျှ ဒေါင်းယူကြပါရှင်။
၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်နေ့၊ မြို့တော်ခန်းမ မှ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြည်သူလူထုကို မိန့်ခွန်းပြောသွားတဲ့
Posted by Thurainlin at 03:21